Marketing nomerika - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Analytics
haino aman-jery sosialy maka ireo fomba marketing nentim-paharazana izay efa nahazatra antsika hatry ny ela ary nampihozongozona azy ireo. Hafanàm-po an-barotra fomba tsara hampiroboroboana ny marikao amin'ity habaka an-tserasera vaovao ity izay mandray an'izao tontolo izao. Hafanàm-po an-barotra manome anao fotoana hivarotana ny tenanao, ny vokatrao sy ny serivisinao ary hahatratra ny mpihaino kendrenao. Mila manana fanatrehana ianao haino aman-jery sosialy mba hananganana ny marikao sy hifandraisanao amin'ny mpanjifanao. haino aman-jery sosialy fomba tsara hifaneraserana amin'ny mpanaraka anao sy ny mpanjifanao ary hananganana fifampatokisana. Amin'ny alàlan'ny mavitrika amin'ny haino aman-jery sosialy, afaka mifandray amin'izy ireo ianao ary mampiditra azy ireo amin'ny resaka momba ny vokatrao sy ny serivisinao. Hafanàm-po an-barotra dia ny teny elo ho an'ny marketing rehetra izay mampiasa fitaovana nomerika hahatratrarana mpihaino.
Ny marketing nomerika no ho avin'ny marketing.
Hafanàm-po an-barotra fomba tsara hampiroboroboana ny marikao amin'ity habaka an-tserasera vaovao ity izay mandray an'izao tontolo izao. Hafanàm-po an-barotra manome anao fahafahana hivarotra ny tenanao, ny vokatrao ary ny serivisinao, ary hahatratra ny mpihaino anao. Tena ilaina ny mandinika Hafanàm-po an-barotra amin'ny maha-ampahany tsy mitongilana amin'ny fehezam-boninkazo tsara haino aman-jery sosialy tetika. Hafanàm-po an-barotra no zava-dehibe ary raha miasa amin'ny varotra ianao ary te hanana vintana hahomby dia tsy maintsy manana fanatrehana ao amin'ny Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube, ary ny hafa ianao. haino aman-jery sosialy sehatra. Aza mieritreritra fa vitanao izany haino aman-jery sosialy ao ambadika dia tsy maintsy mazoto tokoa ianao amin'izany. Hafanàm-po an-barotra zava-dehibe amin'ny asanao raha eo amin'ny sehatry ny teknolojia ianao. Hafanàm-po an-barotra dia miresaka bebe kokoa momba ny karazana varotra rehetra izay mampiasa fitaovana nomerika mba hahatratrarana mpihaino. Ity karazana varotra ity dia misy haino aman-jery sosialy, content marketing tetika, mamorona vokatra sy serivisinao manokana mba hivoahan'ny anaranao. haino aman-jery sosialy fomba tsara hampiroboroboana ny marikao amin'ity habaka an-tserasera vaovao ity izay mandray an'izao tontolo izao. Hafanàm-po an-barotra manome anao fahafahana hivarotra ny tenanao, ny vokatrao ary ny serivisinao, ary hahatratra ny mpihaino anao. Tena ilaina ny mandinika Hafanàm-po an-barotra amin'ny maha-ampahany tsy mitongilana amin'ny fehezam-boninkazo tsara haino aman-jery sosialy tetika. Hafanàm-po an-barotra dia ny zava-dehibe. Raha miasa amin'ny varotra ianao ary te hanana vintana hahomby, dia tsy maintsy manana fanatrehana ao amin'ny Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube, ary ny hafa ianao. haino aman-jery sosialy sehatra. Tokony ho afaka hampitombo ny mpanaraka anao ianao ary hanorina fahatokisana. Hafanàm-po an-barotra dia fomba fanao amin'ny fampiasana fitaovana nomerika mba hanatrarana mpihaino. Hafanàm-po an-barotra misy ny marketing amin'ny mailaka, ny marketing amin'ny milina fikarohana, haino aman-jery sosialy barotra, haino aman-jery sosialy fanatsarana, content marketing, ary maro hafa. Hafanàm-po an-barotra dia safidy tsara ho an'ireo maniry mpandraharaha satria tsy dia lafo ary mora ny mametraka sy mitantana.
Ny fiantraikan'ny haino aman-jery sosialy amin'ny orinasa
haino aman-jery sosialy dia fomba vaovao hivarotra ny anao raharaham-barotra. Mitaky fomba fanao mahazatra amin'ny dokam-barotra izany ary manodina azy ireo amin'ny lohany. Fomba tsara hifandraisana amin'ny mpanjifanao sy hanorina fahatokisana amin'izy ireo ihany koa izany. Heveriko fa ny fiovana lehibe indrindra hitanay tato anatin'ny dimy taona farany dia ny fiovan'ny haino aman-jery karama ho amin'ny haino aman-jery nahazo vola ary Hafanàm-po an-barotra. Izany dia satria lasa mora kokoa ny mandrefy ny valin'ny haino aman-jery azo noho ny an'ny haino aman-jery mahazatra ary ny ampahany dia satria haino aman-jery sosialy nanova ny fomba ifandraisantsika. Hafanàm-po an-barotra dia ny zavatra rehetra misy ifandraisany amin'ny aterineto sy ny isan-karazany sehatra manana fahafahana hiresaka amin'ny mpihaino izahay. Hafanàm-po an-barotra dia momba ny zava-drehetra manomboka amin'ny fanatsarana ny milina fikarohana ka hatramin'ny fanentanana pay-per-click ka hatramin'ny famoronana ny vokatrao manokana sy ny fivarotana azy ireo sehatra toa an'i Amazon, amin'ny fampiasana tranonkala toa ny Twitter sy Facebook hifandraisana amin'ny mpihaino anao. haino aman-jery sosialy tsara satria mamela anao hifandray amin'ny mpihaino kendrena amin'ny fomba vaovao. Manampy anao hanangana ny marikao izany, hanorina ny lazanao ary hanorina fifandraisana amin'ny mpihaino anao. haino aman-jery sosialy dia tsy fomba iray hifandraisana amin'ny olona fotsiny, fa fomba iray hianarana momba ny mpihaino anao sy izay tadiaviny aminao. Toy ny aterineto tsy mitsaha-mitombo ary lasa ampahany manan-danja amin'ny fiainan'ny olona, ​​​​dia lasa toerana iray ahafahan'ny olona manantena ny hahita dokam-barotra momba ny vokatra sy serivisy. Hafanàm-po an-barotra no lalan'ny ho avy rehefa miantehitra bebe kokoa amin'ny aterineto. Hafanàm-po an-barotra dia izay marketing rehetra mampiasa fitaovana nomerika mba hanatrarana mpihaino. Hafanàm-po an-barotra dia mizara ho sokajy roa: marketing amin'ny tranokala sy marketing amin'ny haino aman-jery sosialy. Ireo karazana varotra roa ireo dia mahasoa amin'ny asanao.